Indlela yokuSebenza: Iimiphumo ezimbi zegama elingundoqo
uJack Miller, u-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko yeMpumelelo yoMthengi, uthi xa kuvela ekubhaliseni amanqaku angama-SEO-friendly, ukugxilwa kwegama elingundoqo kubonwa njengento ebalulekileyo. I-Google, i-Bing ne-Yahoo ayithandi, kwaye akufanele usebenzise ngaphezulu amagama angundoqo kumxholo wakho nayiphi na indleko. Ngeentsuku zokuqala ze-SEO, ukugxilongwa kwegama elingundoqo ligama elisebenzise kakuhle kwaye lancedisa i-webmasters ukuba ibe nezinga elifanelekileyo kwi-injini yosesho - foto con reflex analogica. Le mihla, umendo utshintshwe yiyo yonke, kwaye awukwazi ukuphucula umgangatho wakho ngegama elingundoqo. Ngaphandle koko, i-Google inokuhlwaya isayithi lakho kwaye ivinjelwe ixesha lobomi xa uphawula amanqaku angamagama angundoqo.
Yintoni ephosakeleyo ngokugxila kwegama elingundoqo?
Kukhuselekile ukuba uthethe igama elingundoqo elingasetyenzisiweyo ekusebenziseni isicatsho se-SEO esimhlophe, kodwa ngoku sisicatshulwa njengesicwangciso se-SEO esimnyama. Matt Cutts evela kuGoogle ithi inkampani izama okusemandleni akhe ukwahlula phakathi kwamanqaku aphambili kunye nomxholo ophantsi. Nawuphi na owenza igama elingundoqo usebenzisa okanye usebenzisa ii-SEO zobuchwepheshe kufuneka ahlupheke kungekudala okanye kamva. I-Google isoloko ibheka iiwebhusayithi ezinomgangatho ophezulu kunye nomxholo onolwazi. Inkampani ineenjini eziliqela kwiqela layo elisebenzayo ekuthintela igama elingundoqo kunye nokukhawuleza ukuhlawulisa iziza ezibandakanyeke kule nkohliso.
Enye yeengozi ezisisiseko kukuba i-Google iya kunciphisa isigaba sephepha lesayithi lakho.Izikhundla ukuba ziya kususwa okanye zihlawulwe kwiziphumo zejinjini zokukhangela. ukugxila kumanqaku angundoqo. Endaweni, kufuneka uzame ukugcina umgangatho wamaphepha akho ewebhu kwaye usebenze kumazwi angundoqo kuphela xa kufuneka.
Olunye umgca wukuthi ukugxilwa kwegama elingundoqo kunokuthandwa ngabantu abaninzi bakho abathengi kunye neendwendwe. Akufanele ulibale ukuba bafuna ukufunda ukufunda, ukufundisa kunye nezinto ezincedo. Ukuba uye wafaka amaninzi amagama angundoqo kwaye ulungelelanise kumgangatho, awukwazi ukuza kulindeleke kwaye awukwazi ukujika iindwendwe zakho zibe ngabahlali abonwabileyo.
I-keyword Optimization esebenzayo:
Kuyinyaniso ukuba ukusebenzisa amagama angundoqo kubaluleke kakhulu, kodwa kufuneka uqonde umehluko phakathi kokusetyenziswa kwamagama angundoqo kunye negama elingundoqo. Makhe ndixelele apha ukuba zizinto ezimbini ezihlukeneyo ze-SEO. I-Google iyaphuka phantsi kwegama elingundoqo elingundoqo kodwa lithanda amanqaku aqulethe amanani afanelekileyo anengqiqo yamagama angundoqo.
Ngoko ke, kufuneka ucinge ngamagama akho akwikrele kwaye ungasebenzisi amagama amaninzi kunye namaqela kumhlathi omnye. Awufanele uhlale ugxila kwi-bots ye-SEO ebonisa izayithi kwaye ucinge ukuba inokwethenjelwa. I-Google inemithetho nemigaqo yayo, kwaye yonke i-webmaster kufuneka ilandele ukuba ufuna ukuphumeza iziphumo ezifunayo.
Indlela yokulinganisela amagama akho angundoqo?
Ngaphandle kwamagama asemqoka, akufanele usebenzise amabinzana aphazamisa ukuhamba komxholo wakho. Iibhloko zeeblogi kunye ne-webmaster kugxininise kwii-keywords kunye neengongoma, kodwa kufuneka ugcine ukuxinwa kwegama elingundoqo kumaphesenti amabini ukuya kwezine kuphela. Unokusebenzisa i-Google yolwazi oluchanekileyo ukuze uhlale usesikhathini malunga nezinto ezithandwa yiGoogle kunye nokwandisa ukuboniswa kwakho kwi-intanethi.